Mogadishu Journal » Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Roob ka da’ay Magalada Hargeysa
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya Magalada Hargeysa ayaa waxaa ay sheegayaan in khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah uu ka dhashay roobka guga oo xalay ilaa Shalay gelinkii dambe ka da’ayay Xaafadaha kala duwan ee Magalada Hargeysa.
Roobkaas oo watay biyo daadad ah ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyooday ilaa Shan ruux halka Sagaal kale ay ku dhaawacmeen.kuwaas oo dhamaantood ka mid aaha dadka ku nool Magalada Hargeysa.
Mas’uuliyiin ka tirsan Soomaaliland iyo dadka Shacabka ah ayaa u gurmaday dadka ku dhaawacmay roobka daadadka watay,iyada oo la geeyey Isbitaalka weyn ee Magalada Hargeysa si halkaasi loogu daaweeyo.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xalay waxa uu kormeeray Goobaha uu khasaaraha ka geystay roobka,isaga oo u tacsiyadeeyey dadkii roobkaasi ku geeriyooday halka uu Caafimad u rajeeyey dadka ku dhaawacmay.
Inta badan Gobolada dalka Soomaaliya aya markii uu ka da’o Roobka guga waxa uu geystaa khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed,waxaana gurmad kala duwan sameeya Maamulada deegaanada uu roobka ka da’o iyo Bulshada qeybahooda kala duwan.